Njem Tim Cook site na Europe gara n'ihu: kwụsị na Glasgow | Esi m mac
Njem Tim Cook site na Europe gara n'ihu: kwụsị na Glasgow
Mgbe nleta na France na App Store na Marseille na Carrousel du Louvre na Paris, awa ole na ole gara aga ka a hụrụ ya Alemania. N'oge ahụ, ọ zutere ndị na-emepụta arịa Dula, ndị mmepe nke ngwa Kitchen Stories na ndị otu Refinery29.
Dị ka onye òtù ọlụlụ anyị bụ Javier gwara anyị, Tim Cook natara onyinye dị ugogo elekere ole na ole gara aga Prọfesọ Honoris Causa nke Mahadum Glasgow. Ndị bịaranụ nwere ike ịga mkparịta ụka dị mkpirikpi n'oge emume ahụ, ebe onye isi nke Apple gosiri Mahadum Glasgow dị ka otu n'ime ndị kacha mma na Europe.
Dị ka a tụrụ anya ya, otu mkparịta ụka pụrụ iche bụ mkpebi ndị Donald Trump mere n'ime izu ndị na-adịbeghị anya. Banyere iwu iji gbochie mbata nke ndị njem si mba ụfọdụ, Cook kwuru, sị:
ọ bụrụ na anyị ebilighị na-eme ngagharị iwe, anyị na-abụ akụkụ nke iwu a
Mana nke a abụghị blog ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ihe masịrị anyị bụ ụwa nke Apple na Mac. N'ihe metụtara ụlọ ọrụ ya, o gosipụtara na ha na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mpaghara, gụnyere mmemme. N’ikpeazụ, Steve Jobs jụrụ ya.
N'ikpeazụ ọ bụ oge iji nweta aha ahụ. Dị ka onye ọ bụla na-asọpụrụ onwe ya na America, Cook nwere mmasị na ngosi ahụ. Ya mere, mgbe ọ natara aha ahụ, o mere ọfụma na mmeri.
N'okwu ekele, o nwere oge ịgwa ụmụ akwụkwọ ahụ okwu. Ọ gwara ha na ha ekwesịghị ịkwadebe maka ịkpata ego, n’ihi na ọ na-emefu ngwa ngwa ma ọ bụ ezughị. O nyere dị ka ihe atụ, "ịhụnanya na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ" ọ na-amasị onye nke mbụ na ọ bụ ndụmọdụ ọ nyere karịa otu nwa okorobịa.
Site na nleta ahụ na Glasgow, anyị amaghị maka atụmatụ nke Cook. Ọ ga-abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na a hụrụ ya na Spain na inlọ Ahịa Apple. Ikekwe otu n'ime nleta nkà na ụzụ kachasị mkpa na afọ ndị na-adịbeghị anya na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Njem Tim Cook site na Europe gara n'ihu: kwụsị na Glasgow
Were Macva sistemụ nhicha sistemụ Movavi nọrọ na ya, were kwụrụ ụgwọ a na - apụghị ịgbagha agbagha
Achọpụtara Microsoft Word macro malware